Maanka dadweynaha iyo khudbaddii Faroole: “Umadda Puntland gabar yar ha dhaafsan masiirkeeda!” (dhegayso) – Radio Daljir
Maanka dadweynaha iyo khudbaddii Faroole: “Umadda Puntland gabar yar ha dhaafsan masiirkeeda!” (dhegayso)
Janaayo 28, 2019 2:03 b 0
Waa mar kale iyo Maanka Dadweynaha & Magrafoonka Daljir. Maanta maanka dadweynaha Puntland waxaa weli ka guuxaya khudbaddii Oday Faroole, taas oo Faroole uu ku yiri waa in maamulka Somaliland uu Tukaraq ka baxaa oo Gambarre ku noqdaa.
Hadalkaas Faroole oo magrafoonka Daljir dabagalay ayaa shacabku waxa ay ka muujiyeen caro aad u xooggan, waxaana loo arkay hadal u adeegaya maamulka Somaliland, kana tarjumaya xidid doorashada Oday Faroole.
Madaxweyne Deni oo si dadban uga jawaabaya hadalka xidid doorashada Faroole ayuu khudbaddiisa ku sheegay in “Puntland u hawlgalayso xoreynta dhammaan deeganka Puntland ee duullaanka lagu qabsaday.”
Dhanka kale Madaxweyne Kuxigeen Axmed Kharaash oo la weydiiyey in uu jawaab ka bixiyo hadalka Faroole ayaa ku jawaabay “jawaab waxaa ugu filnaan doono ficilkeyga!”
Muqdisho: Su’aalo la iska waydiinayo maxaabiista Daacish ee Sakiinta ku weerartay maxbuuska Britishka